Izinombolo ze-iPhone 12 Model (A2172, A2402, A2403, A2404) - Amagajethi
Izinombolo ze-iPhone 12 Model (A2172, A2402, A2403, A2404)
I-iPhone 12 ingenye yezengezo zakamuva kuhlelo lwe-iPhone. Kuyinto edume kakhulu manje etholakala kwi-inthanethi. I-Apple ihlala ihlose ukuba phambili embonini ngokusungula kwayo. Eminyakeni edlule, lo mkhiqizo usebenze ekwakheni ubukhona obukhulu. Baletha ubuchwepheshe obusha obutholakala kubantu. Sincoma ukuthi uzame namuhla.
I-iPhone entsha kuzoba ukuthenga kwakho okuhle kakhulu konyaka. ITechtober ikulethela amadivayisi wekhwalithi, kanti ne-iPhone 12 ngenye yazo. Kulo mhlahlandlela, sizoxoxa ngamamodeli amahle kakhulu atholakalayo edivayisini.
Kungani amamodeli ahlukile?
Izinombolo ze-iPhone 12 Model zisiza ekuboneni isifunda lapho le divayisi ivela khona. Lezi zigaba ezindaweni zikwenza ukwazi ukuthola leyo etholakala endaweni yangakini. Izici ezibalulekile zamadivayisi zihlala zinjalo. Uzothola izinhlobo ezine ezahlukahlukene zohlu lwedivayisi lonyaka. Izosiza ekwenzeni lula inqubo yokukhiqiza.
Abasebenzisi bangathenga i-iPhone 12 kunoma yisiphi isitolo se-Apple. Sincoma ukuthi uhlole leyo etholakala endaweni yakho. Kukhona inguqulo mini ye-iPhone 12 etholakala emakethe futhi.
Izinombolo ze-iPhone 12 Pro Max Model
Izici ze-iPhone 12:
Kunezici eziningi ezihlukile nge-iPhone 12. Akuyona ifoni ephambili yonyaka kepha iletha ikhwalithi kubo bonke abasebenzisi. Nazi izinzuzo zokwenza ukuthenga kwakho namuhla.
1. I-chip esheshayo
I-iPhone 12 isebenzisa i-Apple A14 Bionic chip. Iyona etholakala ku-iPhone 12 Pro naku-Pro max lineups futhi.
Abasebenzisi ngeke bayekethise ekusebenzeni lapho bethenga leli thuluzi elihle. I-chip iyakwazi ukudubula ngobuchwepheshe beDolby Vision. Abasebenzisi bathola nenjini esheshayo esheshayo ye-neural ukugoqa lezo zinombolo.
2. Isethaphu yekhamera emibili
I-iPhone 12 iza namakhamera amabili ukukunikeza izithombe ezinhle. Ukuphela kwendawo lapho ihluke khona ochungechungeni lwePro. Idivayisi isazothatha impilo njengokuchofozwa ngamalensi aphelele. Amalensi e-Wide ne-Ultra-Wide eza nemodi yasebusuku.
Kukusiza ukuba uchofoze izithombe ezinhle ngisho ebumnyameni. Abasebenzisi bangathola yonke imininingwane ngesiphetho esiphakeme se-pixel.
3. Isibonisi esiphelele
Isibonisi se-iPhone 12 siyaqhubeka ngokuthambekela kobukhulu. Abasebenzisi bangasebenzisa idivayisi ukuthola ama-engeli wokubuka aphelele.Isikrini se-XDR OLED sikunika konke ukukhuthazeka sakaza ama-movie nokuqukethwe. I-Apple yenza ukweqa okukhulu ngobuningi bayo be-pixel kusuka kumadivayisi wangaphambilini.
Uzothola ukulungiswa okuphezulu kunoma iyiphi ifoni ngalokhu kuthenga.
I-iPhone 12 yenza izinto ezintsha esigabeni sokushaja. Bethula ubuchwepheshe beMagSafe kule divayisi ephathekayo. Abasebenzisi bangabuye bavuselele amadivayisi abo ngeshaja elula engenantambo.
Ilungele labo abajabulela ubuchwepheshe bamuva. Jabulela impilo yebhethri yosuku phakathi nemizuzu embalwa.
5. Ijubane eliphezulu
Umcimbi we-Hi-Speed ​​we-Apple ukhuluma ngakho konke ngokugxila kwabo ekuthuthukiseni ukuxhumana. I-iPhone 12 izosekela ubuchwepheshe be-4G bamuva. Izokwenza ukulandwa kwakho kusheshe.
Abasebenzisi bangasakaza ngokuzikhandla okuqukethwe komkhawulokudonsa kalula. Kuyisango elihle kakhulu lobuciko bakho nokuzijabulisa. Abasebenzisi bakhuphukela kumabhendi angama-32LTE namadivayisi abo e-iPhone 12. Kuyinto enkulu kunazo zonke i-smartphone emakethe njengamanje. Ulungele ukwenza kahle kakhulu ngale divayisi.
Lezi ngezinye zezici ezimangazayo ze-iPhone yakamuva kuhlelo lwe-Apple. Sithemba ukuthi ujabulile ukwazi ngamamodeli ahlukene edivayisi futhi.
Izinombolo zezinombolo ze-iPhone 12:
Kunezinhlobo ezine ezahlukahlukene ezitholakala kwi-inthanethi zedivayisi yakamuva ye-iPhone 12. Yilezi, okungukuthi - A2172, A2402, A2403, no-A2404. Abasebenzisi bangathola izici ezinhle kakhulu kulokhu ngokuthenga kwabo okuhle. Okuhlukile kuzohluka ngokuya ngendawo yakho emhlabeni. Nazi izinyathelo -
Imodeli ye-A2172 itholakala kuphela e-United States. Kuphela kubabukeli ezweni ngenxa yobuchwepheshe be-5G. Isebenzisa izici ze-mmWave ukuletha inethiwekhi esheshayo. Idizayini inezinwele ezithile ngokuqhathanisa namanye amamodeli. Bafaka ama-antenna we-5G wezidingo zakho zejubane eliphezulu.
Abasebenzisi futhi bathola ukufinyelela kuzici ezimbili ze-sim nge-Physical nano-sim nenye i-e sim. Imodeli futhi iza namabhendi aphindwe kabili ka-n260 no-n261 wokuxhuma kalula. It is a exclusive 5G technology, engatholakali kwenye indawo.
Ungathola imodeli ye-A2402 ezifundeni ezinjengeCanada neJapan. Ifana kakhulu nenguqulo yase-US kepha ayinayo isici se-5G.Lawa mazwe awanabo ubuchwepheshe beselula okwamanje obusebenzisayo. Sincoma ukuthi uzame lokhu ukuze usebenzise kalula.
Eminyakeni edlule, inguqulo yaseJapan ibone ushintsho olukhulu. Abasebenzisi ezweni bazobona umsindo we-shutter uma kukhulunywa ngokuchofoza izithombe. Kuyisici esingatholakali kunoma iyiphi enye idivayisi ye-iPhone. Abasebenzisi bangasebenzisa futhi isici esimnandi se-sim esikabili kule divayisi.
Uhlobo lwe-A2403 lubizwa ngokuthi yinguqulo yamazwe omhlaba ye-iPhone 12. Itholakala ezifundeni ezifana ne-EU, Asia ne-Australia. Iningi lomhlaba lizobe lithola le nguqulo ye-iPhone 12. Uhlobo oluvuliwe lwe-iPhone lungasekela iningi lamanethiwekhi atholakalayo esifundeni.
Sincoma ukuthi uzame ukuthola isipiliyoni esihle se-smartphone. Umagazini uphinde usebenzise isici se-sim esimbili. Ukucushwa kwesimo esisodwa se-Physical ne-one kuhlala kunjalo lapha.
Uhlobo lwe-iPhone A2404 luyatholakala ezifundeni ezimbalwa. Kukhethekile ezimakethe zaseChina, eHong Kong naseMacau. Imikhawulo ekule mingcele iphezulu kakhulu. Abasebenzisi bangathenga uhlobo oluthile lokujabulela isipiliyoni se-iPhone sokugcina.
Ihlukile ngoba le divayisi inethileyi le-sim elinezikhala ezimbili zekhadi lomzimba. Abasebenzisi bangajabulela isici se-sim kalula. Inemikhawulo eminingi kubathwali abatholakalayo.
Lawa amamodeli atholakalayo we-iPhone yakamuva 12. Abasebenzisi bangajabulela isipiliyoni esimnandi se-smartphone. Bheka lapha bese uthola okuzotholakala ezimakethe zakho.
Ungayithenga kanjani i-iPhone 12?
Abasebenzisi bangathenga i-iPhone 12 ezitolo zabo eziseduze ze-Apple. Sincoma ukuthi uzame isitolo esiku-inthanethi ukusebenzisa lesi sici. Ilungele abantu abajabulela ubuchwepheshe bamuva embonini.
I-iPhone yakamuva iletha ezinye izici ezinhle etafuleni. Kulo mhlahlandlela, sixoxa ngezinhlobo ezahlukahlukene zedivayisi ngokunemba nangemininingwane. Sithemba ukuthi ungayisebenzisa imininingwane ukwenza isinqumo unolwazi.
Izinombolo ze-iPhone 11 Pro Model
i-roblox robux ibe yimali yangempela
Ukubhaliswa kwe-netflix akusebenzi
ungayithola kanjani ifolda yomusi
ungayivula kanjani ingxoxo ye-twitch
ungayilanda kanjani i-netflix kokungaxhunyiwe ku-inthanethi ku-mac
I-roku ngeke ixhunywe ku-netflix
Isiguquli se-https //ytmp3.com